शिव परियारले दलित शव्द खारेज गरियाेस भनेपछि आस्थाले दिईन् यस्ताे जवाफ – Online Nepal
शिव परियारले दलित शव्द खारेज गरियाेस भनेपछि आस्थाले दिईन् यस्ताे जवाफ
May 27, 2020 19889
हँसिलो मुहार, पातलो दह्रीजुंगा, रंगीबिरंगी सर्ट, शिरमा ढाकाटोपी, पिठ्युँमा ब्याग अनि ब्यागमा उनिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा । सोमबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर ‘भाइरल’ भइरहेको छ ।
उनी हुन्, जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक । उनले अन्तरजातीय प्रेम गरे, प्रेमिकासँग विवाह गर्न खोजे । बदलामा उनको जीवन १९ वर्षमै सकियो । पश्चिम रुकुम चौरहजारी नगरपालिका–८, सोतीमा गाउँलेको कु टाइबाट उनको मृत्यु भयो । उनीसँगै टीकाराम सुनारको पनि ज्यान गयो ।
नवराजको समर्थनमा पुरा नेपाली उत्रिएको छन् । संसदमा पनि उनकाे बारेमा कुरा उठ्याे । उनकाे समर्थनमा सारा नेपाली जागेका छन् । संसदमा बाेल्दै राष्ट्रियसभामा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले भने , ‘उनीहरु ३ वर्ष देखि प्रेम सम्बन्धमा थिए’ भनेर प्रस्ट्राएका थिए । त्यसपछि पुजा शर्मा हामी छिमेकीको बल मिचाँइसँग लड्नु कि आफ्नै घर भित्रको अन्तरजातिय विभेदसँग ? भन्दै उनकाे समर्थनमा उत्रिइन ।
चर्चित गायिका आस्था राउत पनि नवराजको पक्षमा उभिएकी छिन् । सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै उनले ‘दलित’ शब्द हटाउँदैमा नवराजहरुमाथिको अन्याय हट्छ भन्ने होइन भन्ने आशयको स्टाटस लेखिन् हेरौं
उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :
यो समय एकदमै निर्मम समय छ । यो विश्व जितेर ब्रमाण्ड्तर्फ उन्मुख मानवजाति आज अदृश्य भाईरसको आक्रमणले अस्तित्वकै संकटमा पुगेको छ । विश्वका सबै देशहरु मिलेर यो संकटको सामना गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
मानिस समग्रमा एकै भएपनि हामी भुगोलका आधारमा, जातका नाममा, धर्मका नाममा, वर्गका नाममा, सम्प्रदायका नाममा, लिङ्गका आधारमा र थुप्रै नाममा जहिल्यै बिभक्त छौँ ।
मलाई लाग्छ विभिन्न नाममा बिभाजित मानवजातिलाई एकजुट बनाउनकै लागि कहिलेकाहीँ विश्वसंकटहरु आईपर्दछन् ।
तर हामी छौँ कि कहिले पनि चेत्ने नाम लिँदैनौ । विश्वमा संकट आउँछ, हामी हाम्रो देश त ठिकै छ भनेर चुपचाप बस्छौं । जब देशमा आईपर्छ, मेरो त क्षेत्र सुरक्षित छ नि भनेर निश्चन्त हुन्छौं । तर यो पक्का छ कि एकदिन हामी सबै त्यस्ता संकटको भुमरीमा पर्नेछौँ ।
हेरौँ त, कोरोनाबिरुद्द एक हुँदै गरेको विश्वलाई के के कुराले बिभाजित गरेको छ ? भारत र नेपाललाई कालापानी लिपुलेकको सिमा विवादले बिभाजित गरेको छ । त्यहि सीमानामा लागेको चोटले राष्ट्रियताका नाममा एकढिक्का भएका सारा नेपालीलाई यतिबेला रुकुममा भएको घटनाले नराम्ररी बिभाजित गरिदिएको छ । हिजो खुकुरी र तरवार भिरेर सीमामा लड्न तयार भएका कथित ‘दलित’ दाजुभाईहरुका नौनारी गलेका छन् । सीमा मिच्ने भारतभन्दा ठूलो शत्रु उनिहरुले देशभित्रै, वल्लो पल्लो गाउँमै भेटेका छन्। सहि ढंगले रुकुम ह त्याका ण्ड सम्बोधन भएन भने यसले निम्त्याउने नतिजा भयावह हुन सक्छ ।
त्यसैले मेरो बिनम्रतापुर्वक अनुरोध छ ??
हामी बिभक्त हुने होइन कि एक हुने काममा लागौँ, भोक भोकै मर्ने संघारमा उभिएका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु बचाउन तिर लागौँ, महामारीले ग्रस्त देशवासीहरुको उपचारमा लागौँ, जातीय विभेदका नाममा ज्यान गुमाउन बिवश नवराजहरुलाई न्याय दिनका लागि जुटौँ, खाडी मुलुकबाट रोजगार गुमाएर फर्किँदै गरेकाहरुको रोजगारीको खोज गरौँ । पहिले हामी एक हुनतिर लागौँ ! हामी बलिया, शिक्षित, सचेत, आत्मबिश्वासले भरिपुर्ण, नेपाली हुन सक्यौं भने सीमा सुरक्षा गर्न कसो नसकिएला ?
फेरि पनि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको समस्याहरुको प्राथमिकताको हो । क्रमैसँग मुद्दाहरुको गाम्भिर्यताका आधारमा विषयहरु प्राथमिकतामा परे भने हामीलाई त्यसको निराकरण गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।
नवराज वि क र उनका साथीहरूको बर्बरतापुर्ण हत्याको घट्नामा पनि शब्दको राजनितीमा लाग्नुले विषयान्तर गर्नु हो । ‘दलित’ शब्द हटाउँदैमा नवराजहरुमाथिको अन्याय हट्छ भन्ने होइन । हटाउनुपर्ने त समाजले गर्ने विभेद हो, अपमान हो, अन्याय हो ।
जय नेपाल ??जय नेपाली
Prevरुकुम- जाजरकोट: सुष्मा मल्लको घरमै पुगे भोजराज थापा, लखेटी लखेटी भेरी नदि पुराउनेहरु यस्तो भन्छन्(पुरा भिडियो सहित)
Next“नबराज तिमिले गरेको निष्पक्ष मायाकाे बद्लामा आफ्नो प्राण दिनु पर्यो”
डरलाग्दो भयो काठमाडौ ! एकै दिन संक्रमित ३०० भन्दा बढी
सरकारको कदमले नागरिकमा एकता, भारतीय सुरक्षा फौजलाई जनताले यसरी लखेटे
कर्मचारीको उल्टै भत्ता कटौती, तलब बारे बजेटले यस्तो बोल्यो
सु तिरहेका पितालाई ३ छोरीहरुले कु टी कु टी मा रे, दिदीबहिनीका कुराले सबैका आँखा रसाए